I-Ecommerce yeHlabathi: Ngokuzenzekelayo vs Machine vs People Translation for Localization | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 18, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 18, 2020 UAugustin Prot
Ukuwela umda ecommerce kuyanda. Kwiminyaka nje emi-4 eyadlulayo, a Ingxelo kaNielsen cetyiswa ukuba I-57% yabathengi bathenga kumthengisi waphesheya kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo. Kwiinyanga ezidlulileyo i-COVID-19 yehlabathi ibenempembelelo enkulu kwintengiso kwihlabathi liphela.
Ukuthengwa kwezitena nodaka kuye kwehla kakhulu e-US nase-UK, kunye nokwehla kweentengiso zentengiso e-US kulo nyaka kulindeleke ukuba iphindwe kabini kunamava kwingxaki yemali kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Kwangelo xesha, sibone ukonyuka okukhulu kurhwebo lwe-e-yorhwebo. IntengisoX uqikelelo Umda we-e-commerce e-EU ukhule nge-30% kulo nyaka. E-US, idatha evela Global-e ifunyenwe ukuba Urhwebo lwamanye amazwe lukhule ngeepesenti ezingama-42 ngoMeyi kulo nyaka.
Naphi na apho uphawu lwakho lokuthengisa lusekwe kwintengiso yamanye amazwe kunokuba ngumtya. Ayothusi into yokuba abathengisi kwihlabathi liphela bajonge ukulithatha eli candelo likhulayo leshishini elitsha. Nangona kunjalo, ukubambisa ngokufanelekileyo abathengisi abanqumla imida kufuneka baye ngaphaya kokubonelela ngokuguqulelwa kwesiza nje ukuba undwendwe luhlale kwindawo yabo.
Ababoneleli becommerce kufuneka babandakanye indawo kwizicwangciso zabo zokukhula. Oku kuthetha ukuthathela ingqalelo izinto ezinje ngolwimi lweenkobe i-SEO, ukubonelela ngemifanekiso efanelekileyo kwimarike yendawo - ukuba ungumthengisi waseYurophu ozama ukuthengisa kwimakethi yaseAsia, usebenzisa kuphela imifanekiso ye-euro-centric kwindawo yakho iya kuyikhupha Umthengi onokubakho.
Ubeko lwasekhaya kukuqinisekisa ukuba indawo yakho ithathela ingqalelo yonke inkcubeko yemimandla ozama ukuyithengisa.
Oku kungabonakala kungumsebenzi ongenakwenzeka. Iindawo ezininzi zentengiso zinamakhulu amaphepha ahlaziywa rhoqo kunye nokuqesha abaguquleli abaziingcali kuya kubiza kakhulu. Kwangelo xesha, uninzi lunokuthi luthathele ingqalelo ukuguqulelwa komatshini kunye nokubekwa eluntwini njengesiketshi kwaye kungachanekanga kakhulu ukuba kuxhomekeke kubo. Kodwa njengokuba nabani na osebenzisa isoftware yokuguqulela umatshini esazi, itekhnoloji iyaphucuka ngalo lonke ixesha. Itekhnoloji inokuba sisixhobo esibaluleke kakhulu kulwakhiwo lwewebhu, kwaye xa idibene nabantu bokwenyani, inokufikelela kubude obumangalisayo.
Ngokuzenzekelayo ngokuGuqulwa komatshini
Ukucinga gwenxa okuqhelekileyo kukuba uguqulelo oluzenzekelayo ikwayinto enye ne ukuguqulelwa komatshini. Ngokutsho kwe Igunya lehlabathi kunye noGcino lwasekhaya (GALA):
Umatshini wokuguqulela -Isoftware ezenzekelayo ngokupheleleyo enokuguqula umxholo womthombo kwiilwimi ekujoliswe kuzo. Itekhnoloji yokuguqulela ngomatshini ibandakanya ababoneleli abanjengoGoogle Guqula, iToliki yeYandex, uMguquli weMicrosoft, uDLL, njl. Kodwa aba baguquleli bomatshini basebenzise kwiwebhusayithi baya kugquma kuphela iilwimi zemveli xa undwendwe lukule ndawo.
Uguqulelo oluzenzekelayo -Uguqulo oluzenzekelayo lubandakanya ukuguqulelwa komatshini kodwa ligqitha Sebenzisa isisombululo sokuguqulela kungekuphela nje ukujongana nokuguqulelwa komxholo wakho kodwa kunye nokulawulwa kunye nokuhlelwa komxholo, i-SEO yawo onke amaphepha aguqulelweyo, kwaye emva koko uphathe ukupapashwa komxholo ngokuzenzekelayo, onokuhlala ngaphandle kokuba uphakamise umnwe. Kubathengisi, iziphumo ezivela kwesi sicelo setekhnoloji zinokunyusa ukuthengiswa kwamazwe aphesheya kwaye zibiza kakhulu ngendlela eyiyo.
Abantu vs Ukuguqulelwa komatshini
Enye yezona ngxaki ziphambili ekusebenziseni umatshini kuguqulo lwasekhaya kukuchaneka. Abathengisi abaninzi baziva uguquko olupheleleyo lomntu kuphela kwendlela ethembekileyo eya phambili. Indleko yoku, nangona kunjalo, inkulu kwaye iyathintela abathengisi abaninzi- ungayichazanga ayikhathaleli ukuba umxholo lowo uguqulweyo uza kuboniswa njani.
Ukuguqulelwa komatshini kunokukugcinela ixesha elininzi kwaye ukuchaneka kuxhomekeke kulwimi olukhethiweyo kunye nendlela eziphuculwe ngayo kunye nezixhobo zokuguqula ezo zibini. Kodwa yithi, njengoko indawo yokulinganisa iqikelela ukuba ukuguqulelwa kulungile ngama-80% exesha, konke okufuneka ukwenze kukufumana umguquli oqeqeshiweyo ukuze aqinisekise kwaye ahlele iinguqulelo ngokufanelekileyo. Ngokufumana umaleko wokuqala wokuguqulela umatshini ukhawulezisa inkqubo yokwenza iwebhusayithi yakho yeelwimi ezininzi.
Ukusuka kwimbono yezemali, olu khetho luluqwalaselo olukhulu lokwenza. Ukuba uqesha umguquli oqeqeshiweyo ukuqala ekuqaleni kwaye asebenze kwimilinganiselo yamaphepha ewebhu, i-bill oyakuyinyusa iya kuba yinkwenkwezi. Kodwa ukuba wena ukuqala Ngomaleko wokuqala wokuguqulela umatshini emva koko uzise abaguquleli abangabantu ukuba benze uhlengahlengiso apho kukho imfuneko (okanye iqela lakho lithetha iilwimi ezininzi) zombini umthwalo wazo kunye neendleko zizonke ziya kuncitshiswa.
Ukuboniswa kweWebhusayithi kunokubonakala ngathi kuyiprojekthi eyoyikisayo, kodwa iphathwe ngokuchanekileyo ngokudityaniswa kwetekhnoloji kunye namandla abantu ayiwona msebenzi mkhulu njengoko ucinga. Ukunqumla umda kwi-ecommerce kufuneka ibe sisicwangciso sabathengisi esiya phambili. UNielsen uxela ukuba Iipesenti ezingama-70 zabathengisi eyayiyekwe yangena kurhwebo lwe-e-commerce yayinenzuzo kwimizamo yabo. Nawuphi na umrholo wokwenziwa kwendawo kufuneka ube nenzuzo ukuba wenziwe ngokufanelekileyo ngetekhnoloji kunye nemida yetekhnoloji engqondweni.
tags: uguqulelo oluzenzekelayoDeepLurhwebo lwehlabathiezorhwebo jikeleleukuguqulelwa kolwimiindawokwasekhayaukuguqulelwa komatshiniUkuguqulelwa kolwimi ngesandla
UAugustin ngumseki weqela weglot, Isisombululo seelwimi ezininzi kwiiwebhusayithi. Idalwe ngo-2016-iWeglot yakhelwe ukwenza ukuguqulelwa kwewebhusayithi ngokukhawuleza, ngokulula nangokukhawuleza. Ngemvelaphi kwezemali, uAugustin wafudukela kwilizwe le-SaaS ukuya kufumana isisombululo esinceda iinkampani zivelise ukukhula kwamazwe aphesheya.